Maalinta: Noofambar 13, 2018
Hirgelinta Dagaalka IZBAN ee Alsancak
Wadaxaajoodka gorgortanka wadajirka ah ee u dhexeeya shaqaalaha '342' iyo madaxdu waxay is afgarad ka gaadheen İZBAN, oo ah nidaam tareen yar oo tareemi ah oo mideeya İzmir wadada waqooyiga-koonfur. Maanta, Ururka Shaqaalaha Waddooyinka Tareenka ku dhejiyay shaqo-joojin lagu sameeyay saldhigga 'ZBBAN' ee Alsancak. [More ...]
Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha M. Cahit Turhan, 10-11 Nofeembar 2018 November, Ankara-Sivas iyo Ankara-Izmir YHT ayaa laga heley sahan. Wasiir Ku-xigeenka Enver Iskurt iyo Agaasimaha Guud ee TCDD İsa Apaydınweheliya [More ...]
Hindisaha Kacaanka ee Elazig
Duqa degmada Elazig, oo hoos yimaada maamulka madaxweyne Mujahid Yanılmaz, 2014 - 2018 intii u dhaxeysay sanadihii 114 wuxuu bulshada u soo bandhigay mashruuca cusub. Gaadiidka laga raaco mashaaricda masuuliyada bulshada, laga bilaabo 6 haadka boulevards ilaa xad dhaafyada [More ...]
Xilliga Motocrost Xilli final ah ee Afyon
Turkey stadian Championship, lugta ugu dambeeyey ee degmada Afyonkarahisar marti in our gobolka lagu qaban doonaa November 17-18. Farsamo, xirfad, geesinimada iyo dheelitirka taagan in Turkey stadian Championship 5. Cagtiisa ayaa mar kale neefsan doonta. engine [More ...]
7 maalmood 24 saacadood ee hawlgalka aan joogsiga lahayn. 3 inta udhaxeysa Varsak-Zerdalilik, oo ay maamusho Dowlada Hoose ee Antalya. Shaqooyinka Mashruuca Nidaamka Raadinta Etap wuxuu soconayaa xawaare buuxa maalin iyo habeenba. Kooxo dad ah habeenkii 100 [More ...]
TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ iyo TÜVASAŞ micnaheedu waa dhamaystirka mideynta
Gudoomiyaha UDEM HAK-SEN Abdullah Peker ayaa qoraal saxaafadeed qoraal ah ka soo saaray isku darka shirkadaha hoos taga TCDD hal dabaq. Qoraalkiisa, gudoomiye Peker wuxuu xafiiskiisa ku booqday kuxigeenka guud ee TŞDEMSAŞ Maareeyaha guud Mehmet Başoğlu [More ...]
Qeybta Manisa ee xadka Xeerka Qiimeynta iyo Maareynta Baaqa Degaanka, oo waajib ku ah diyaarinta khariidadaha buuq istiraatiijiyadeed iyo diyaarinta qorshayaasha ficillada iyadoo la raacayo natiijooyinka khariidadaha degsiimooyinka ay ku nool yihiin dad ka badan 100 kun. [More ...]
Kayseri kuma kordhin gaadiidka
Duqa degmada Kayseri Metropolitan Mustafa Celik, Kayseri, ayaa ku dhawaaqay Turkey in qiimaha ugu macquul ah oo kibis ah oo isticmaalka biyaha iyo isticmaalka gaadiidka dadweynaha ee qiimaha ugu jaban. Madaxweyne Celik, si kastaba ha ahaatee, rooti, ​​biyo iyo [More ...]
Xoghayaha Guud ee Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli İlhan Bayram, daraasada goobta ayaa baaray daraasada Gebze Darica Metro. Xoghayaha Guud Bayram wuxuu cadeeyay in howsha la qabtay waqtigii loo qorsheeyay wuxuuna yiri “Mutlukent iyo Gebze City Square istaaga iyo OIZ [More ...]
GaadiidkaPark A.Ş., oo ah shirkad hoos timaada Kocaeli Metropolitan Municipal, waa Isuduwaha Dhammaan Hawl wadeennada Nidaamka Tareenka 11. Gaadhiga ayaa martigaliyay kulan komishan. 9 wuxuu ka soo qeyb galay shirkii shirkadaha kaladuwan ee wadooyinka tareenka degmooyinka, iyo sidoo kale dhibaatooyinka qaybta [More ...]
Marka la eego Qorshaha Waxqabadka Deg-degga ah ee Gaadiidka, Dowlada Hoose ee Magaalada Bursa waxay xallisay noodhyada dhammaan isgoysyada halkaas oo ay taraafigku gaareen heer gabagabo ah isla markaana ay ku neefsadeen taraafikada gobolka iyada oo moodalkeeda isgoyska caqliga leh lagu dabaqay Isgoyska Gaarka ah. [More ...]
Annaga oo ah Maareeyaha Guud ee EGO, waxaan ku soo bandhignay fiixiyaha USB-ga ee baskeenna 150 ee isku xirka si aan u siino adeeg raaxo leh rakaabkeena qiimaha badan. Xaraashka USB-ku-dhejiska ah ee lagu rakibay basaska, kuna safraya basaska [More ...]
Duqa Degmada Genç: uş Tareenka Tekkekoy waa inuu la kulmo madaxweynaha
Samsun mustaqbalka dhow oo ay kujirto mashruucyo qaabayn doona mustaqbalka Samsun oo leh buug badiyaaba xallin kara dhibaatooyinka Duqa magaalada Cusmaan Genç, wuxuu sii wadaa inuu booqdo degmada. Duqa magaalada Genç, intii lagu gudajiray booqashooyinka uu ku tegey Tekkeköy iyo Yakakent [More ...]